Momba anay - Ningbo Oturn Machinery Co., Ltd.
OTURN MACHINERY dia ivontoerana varotra & varotra any ampitan-dranomasina natsangan'ny ozinina vondrona misy anay. Izay mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana milina misy tanjona lehibe ho an'ny mpanjifa avo lenta sy avo lenta ho an'ny mpanjifa, izahay ihany koa dia mamolavola vahaolana amin'ny famokarana ho an'ny mpanjifa hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100. Safidio ny fomba fanodinana mahomby indrindra ho an'ny mpanjifa ankehitriny, ary vonjeo ny vidin'ny fampiasam-bola fitaovana ary avereno aloha ny vidin'ny fidirana.
Ny indostria lehibe tafiditra ao amin'ny masininay sy ny tsipika famokarana ho an'ny valizy indostrialy isan-karazany, fantsom-pipa, flange, milina fananganana faritra, angovo, lasitra ary indostria hafa. Volavola ekipa matihanina ho an'ny famokarana Valve Manufacturing, manomboka amin'ny fananganana tsipika fanangonana ka hatramin'ny karazana milina fanodinana valizy indostrialy, fanandramana valva ary fantsom-bozaka, manana traikefa sy tranga marobe isika rehetra.
Ireo vokatra milina izay vokarin'ny vondrona misy anay etsy ambany
1: Masinina milina valizy manokana
2: Milina fandavahana sy milina fanodinana CNC
3: Lathe Drive Center CNC
5: Ivon-toeran'ny milina CNC
6: Ivon-toeram-pamokarana CNC Gantry
7: Lathe Turret mitsangana
8: Masinina hobbing CNC Gear
9: Milina fandavahana lalina
Valve Manufacturing Production Line ihany koa ireo vokatra malaza sy malaza eto amintsika izay namboarin'ny ekipanay matihanina, manomboka amin'ny fananganana tsipika fivoriambe ka hatramin'ny karazana milina valizy indostrialy, fitsapana valizy sy fantsom-boaloboka, manana traikefa an-tsena sy tranga marobe isika rehetra.
Ny vahaolana mamy ho an'ny fiara sy ny fitaovana ao an-trano dia azon'ny vondrona misy anay.
Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny FAW-Volkswagen, SAIC-Volkswagen, Mercedes-Benz sy Toyota, Foton, ary ny air-condo Denso.
Mba hanomezana ny mpanjifanay ny fividianana fitaovana hijanona tokana, sady mampanantena ny hanome ny vidiny tsara indrindra sy ny serivisy mialoha ny varotra ary ny serivisy aorian'ny varotra. Ka manome ny valiny tsara foana ny mpanjifa miaraka amin'ny reputaion avo.
Ny fahombiazan'ny orinasa dia mifototra amin'ny fenitra avo lenta avo lenta, traikefa an-taonany maro ary vahaolana tsara miaraka amin'ny serivisy tsara indrindra, manana vahaolana manokana sy azo antoka foana izahay miaraka amin'ny mpanjifa samihafa.
Hatreto dia nanondrana firenena maherin'ny 50 isika, toa an'i Etazonia, Kanada, Mexico, Alemana, Italia, Suède, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Iran, India, Korea Selatan, Morocco, Africa South, Thailand sns.
Raha mila manatsara ny fahombiazan'ny famokarana sy mampihena ny vidiny ny orinasanao, mankanesa aminay, ny vahaolana horaisinay no ho safidinao tsara indrindra.